Isakhono sethu sokuSila iiCeramics zeAlumina njengoko kungezantsi:
-Inxalenye encinci ukuya kwisayizi enkulu yesakhono.
-I-abrasive ixhathisa ngokugqibeleleyo, i-eco-friendly kunye nobunzima obukhethekileyo.
-Imilinganiselo emihle ehambelanayo ukusuka kwibhetshi yovavanyo ukuya kwimveliso yobuninzi.
-I-Ceramic yokuSila iBurr kwi-aluminium oxide ye-ceramics iprototype ukuya kumthamo ophezulu wokuvelisa.
Ezi mveliso zisetyenziswa kakhulu kwiindidi ezahlukeneyo zokusila ipepile, izicudi zetyuwa, izisi zekofu kunye nezinye izisi, umhlaba weenkozo ulingana kwaye ubonisa incasa entsha kunye nevumba elimnandi kunye nombala. Ezi mveliso zitshiswa ngokupheleleyo kunye ne-95% AL2O3 kunye nokusingqongileyo, zikhuselekile, zinxibe, zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala khona.
i-ceramic grinder yekofu engundoqo alumina ceramic ipepile core